चिसो मौसममा जोर्नी दुख्ने समस्या छ? अपनाउनुस् यि उपाय! - Bichar news - Nepali Online News Portal
चिसो मौसममा जोर्नी दुख्ने समस्या छ? अपनाउनुस् यि उपाय!
काठमाडौं। चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ। यो मौसममा हाम्रो शरीरमा अनेक किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरु देखिने गर्छन्।
चिसो बढ्दै जाँदा देखिने एउटा स्वास्थ्य समस्या हो जोर्नीमा हुने दुखाइ वा आर्थराइटिस। यो रोगको समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई जाडोको मौसम अधिक समस्याको समय हुने गर्छ।
यस मौसममा जोर्नीहरूको टिस्युहरू फुल्छन्, यसले स्नायुमा दुखाइ कम गर्ने नसामा दबाब सिर्जना हुने र दुखाइको महसुस हुने हुन्छ।
आर्थराइटिसका पीडितहरूले जाडोमा जोर्नी र हड्डीमा दुखाइको समस्याबाट जोगिनको लागि निम्न उपायहरु अपनाउन सक्छन्।
– जाडोमा आर्थराइटिसबाट बच्ने एउटै मात्र उपाय भनेको चिसोमा धेरै नहिँड्नु र न्यानोमा रहनु हो। चिसोका कारण मानव शरीरका हड्डीहरुमा सामान्यतया नोक्सानी भइरहन्छ। त्यसैले दुखाइबाट बच्नको लागि न्यानो कपडा लगाएर बस्नु नै सबैभन्दा सजिलो उपाय हो।
–जोर्नीमा हुने दुखाइबाट टाढा रहनको लागि भिटामिन डी अत्यावश्यक तत्व हो। यसका लागि अधिकतम बिहानको घाममा बस्नु उपयुक्त हुन्छ। घाममा रहँदा शरीरलाई न्यानो मात्र हुँदैन, शरीरलाई चाहिने भिटामिन डी पनि यसबाट पाउन सकिन्छ। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने भिटामिन डी सप्लिमेन्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ।
– जाडोमा मानिसहरू प्रायः हाइड्रेटेड रहन बिर्सन्छन् र शरीरमा पानीको कम तहको कारणले धेरै स्वास्थ्य समस्याहरूको सिर्जना हुन्छ। विशेषगरी शरीरमा दुखाइ आउने जस्ता समस्या देखिन्छ। धेरै पानी पिउँदा शरीर सक्रिय हुन्छ र पीडा कम हुन्छ।
– जाडो मौसममा घरमै बसिरहनाले मोटोपना बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ। घरमै बस्दा धेरैजसो स्वादिस्ट खाना खाने गरिन्छ। यसले मोटोपना बढाउँछ। अत्यधिक तौलका कारण पनि घुँडा र खुट्टामा अनेक किसिमको समस्या देखिन सक्छ।त्यसो त चिसो मौसममा बिहान व्यायाम गर्नु पनि त्यति फाइदाजनक भने हुँदैन। तर यसको अर्थ सक्रिय नै नहुने भन्ने भने होइन। यो समयमा सामान्य किसिमको व्यायाम आवश्यक हुन्छ।
–आर्थराइटिसका पीडितहरूलाई तातो पानीले नुहाउनु धेरै उपयोगी हुन्छ।
– माछाको तेलमा ओमेगा ३ फ्याट्टी एसिडहरू आवश्यक हुन्छ। यो हड्डीसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूका लागि धेरै उपयोगी कुरा हो। यसले सूजनको स्तर कम गर्छ। शरीरको मालिश गर्दा संयुक्त र मांसपेशी दुखाइ कम गर्न मद्दत गर्छ।
- ६ मंसिर २०७७, शनिबार १९:४० मा प्रकाशित